'पागल' स्याहार्ने कल्पना : जाे धेरैकाे मलामी बनिन्, आफैं किरिया गरिन्
यज्ञराज जाेशी काठमाडाैं - शनिबार, असार १३, २०७७
‘नाफा–घाटा’को तराजुमा राखेको भए जिन्दगी के हुन्थ्यो?
‘कल्पना’ त्यही थियो । ‘कसैकी श्रीमती, बुहारी अनि आमा।’
बस् एउटी औसत नारी।
र, आज कल्पना भट्ट एउटी ‘औसत’ नारीमात्रै होइनन्, उनी कोही नभएकाहरूका लागि ‘सबथोक’ हुन्।
बाँचुन्जेल जीवन जिउन सडकमा बेसहारा बनेकाको सहारा।
अनि मरेपछि ‘दागबत्ती’ दिने पनि उनै हुन्। त्यसपछि काजकिरिया गर्ने उनै।
त्यसैले त ‘सेतो’ रंगसँग अथाह प्यार छ उनलाई। ‘रंगीन’ सपनाहरू त बस् सबै मिथ्या र फगत लाग्छ।
दृष्टि फाउन्डेसनकी सञ्चालिका हुन्, कल्पना भट्ट।
तीन वर्षदेखि मानव सेवामा सक्रिय कल्पना बेसहारा महिलाको सहारा बनेकी छन्।
उनी सडकमा कुनै महिला बेसहारा बनेको देख्न सक्दिनन्। लगेर धनगढीस्थित उत्तरबेहडीमा रहेको फाउन्डेसनमा राख्दै पालनपोषण गर्छिन्। मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलाहरूको उपचार गर्छिन्। र, निको भएपछि घर जान चाहनेलाई परिवारको जिम्मा लगाउँछिन्।
उनले त्यसरी पुनःस्थापित गरेका कयौं महिला त निको भएर स्वरोजगार समेत बनिसकेका छन्। ‘बर्दियाकी एकजना दिदीले निको भएर अहिले ठेलामा मकै पोल्दै बेच्ने काम गर्नुहुन्छ। उनको अवस्था देख्दा निकै खुसी लाग्छ,’ कल्पनाले आफ्नो सफलता सुनाइन्।
बच्चाहरूको पनि सहारा बनेको छ दृष्टि फाउन्डेसन। फाउन्डेसनले तीन वर्षको अवधिमा ४० महिलाको उपचार गरी निको भएपछि परिवारसँग पुनर्मिलन गराइसकेको छ।
अहिले फाउन्डेसनमा ३४ जना सहाराविहीन दिदीबहिनी तथा चार नाबालक छन्। ‘समाजमा नरपिचासहरूको कमी छैन। मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलामाथि पनि गिद्धे दृष्टि पर्दोरहेछ। अस्मिता लुटिँदा मानसिक सन्तुलन गुमाएकाबाट सडकमै जन्मिएका बच्चा हुन् ती चारैजना,’ उनले भनिन्।
फाउन्डेसनको आहार, मुठीको सहारा
घरबाट निकालिएका, सडकमा भौंतारिरहेका, मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरूको आश्रयस्थल हो दृष्टि फाउन्डेसन।
एक परिवार पाल्न त गाह्रो हुन्छ। तर, हिम्मतवाली कल्पनाले ३५ जनालाई आश्रय दिइरहेकी छन्।
उनले आफू सम्पन्न भएर फाउन्डेसन सञ्चालन गरेकी होइनन्। सानैदेखि मनमा समाजसेवा गर्ने भोक थियो।
आफ्नै जन्मभूमिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने मनमा हुट्हुटी थियो। त्यही हुट्हुटीलाई पूरा गर्न उनले फाउन्डेसनको स्थापना गरेकी हुन्।
फाउन्डेसनमा रहेका भोका पेटहरूलाई पाल्न उनले मुठीदान अभियान चलाएकी छन्।
दानवीरहरूको घरबाट संकलन भएको मुठीदानले भोकाको पेट धान्न पुगेको छ।
तरकारीका लागि कल्पना आफैं झोला बोकेर हाटबजार पुग्छिन्। र, सहयोगको याचना गर्छिन्।
एसएलसीपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कल्पना काठमाडौं हानिएकी थिइन्। डिग्री पढ्दै गर्दा राजधानी बसाइका क्रममा कोशिष नामक संस्थामा काम गरिन्।
त्यहाँ काम गर्दै गर्दा आब आफ्नै ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचिन्। र, धनगढीमा तीन वर्ष पहिले फाउन्डेसनको जन्म भयो।
उनलाई जागिर गरेर वा विवाह गरेर गुमनाम हुनु थिएन। समाजमा केही फरक गरेर बाँच्नु थियो। कल्पना त्यही सोचको उपज ठान्छिन् फाउन्डेसनलाई। अहिले ११ महिलाको टोली उनीसँगै सक्रिय छन्। कफन बेरेकी कल्पना
उनलाई जागिर गरेर वा विवाह गरेर गुमनाम हुनु थिएन। समाजमा केही फरक गरेर बाँच्नु थियो। कल्पना त्यही सोचको उपज ठान्छिन् फाउन्डेसनलाई। अहिले ११ महिलाको टोली उनीसँगै सक्रिय छन्।
कफन बेरेकी कल्पना
चेतनास्तरको कारणले हाम्रो समाजमा अझै पनि थुप्रै रुढीवादी कुराले जरा गाडेका छन्। छोरीचेली अग्रमोर्चामा उभिनु हुँदैन। धेरै बोल्नु हुँदैन। बाउआमाको काजक्रिया गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता अझै पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त छ।
त्यस्तो गर्नेलाई समाजले उग्रमहिलाका रूपमा मात्रै हेर्दैन हेयपूर्ण व्यवहार गर्छ। तर, कल्पना ती सबै चुनौतीसँग पौठेजोरी खेल्दै टाउकोमा कफन बाँधेर बाँचेकी छन्।
उनी फाउन्डेसनमा रहेका महिलाको हेरचाह मात्र गर्दिनन्। मरेपछि दाहसंस्कारदेखि काजक्रियासम्मको काम गर्छिन्। अहिलेसम्म तीनजना महिलाको दाहसंस्कार गरिसकेकी छिन् उनले।
एक महिनाअघि जेठ १५ गते फाउन्डेसनमा रहेकी असहाय महिलाको निधन भयो। उनको आफन्त कोही थिएनन्। कल्पना नेतृत्वको महिलाको टोलीले टाउकोमा कफन बाँध्यो। नजिकै मोहना नदीमा लग्यो।
कल्पनाले सेतो लुगा लगाएकी हुन्छिन्। उनको खुट्टामा चप्पल हुँदैन। पूरै क्रियापुत्री बनेर टाउकामा झापो राखेर घाट पुग्छिन्। र, कल्पनाले मृतकको शरीरमा दागबत्ती दिन्छिन्।
त्यसपछि उनी १३ दिनसम्म कतै निस्किँदैनन्। हिन्दू संस्कारअनुसार १३औं दिनको कार्य सकिएपछि मात्रै बाहिर निस्किन्छन्। यसरी नै उनले तीनजनाको दाहसंस्कार गरिसकेकी छन्।
घर र समाजसँगको विद्रोह
उनी घरकी जेठी छोरी हुन्। उनका आफन्त र आमाको चाहना विपरीत उनी हिँडिरहेकी छन्।
कल्पनाले बिहे गरेकी छैनन्। परिवारका सदस्यहरू बिहे गरोस् चाहन्छन्। तर, कल्पनाले जीवनभर बिहे नगर्ने संकल्प लिएकी छन्। त्यही लडाइँका कारण कल्पनाको आमासँग बोलचाल नै बन्द भयो।
अडियोमा कल्पनाको कथा- कफन बेरेकी कल्पना
आमाको मन राख्न उनले डडेल्धुराबाट एउटा बच्चा धर्मपुत्रको रूपमा पालेकी छन्। जसले गर्दा उनकी आमाको मन सम्हालिएको छ। र, थोरै भए पनि आमा खुसी भएकी छिन्।
उनलाई समाज धेरै परिवर्तित भएको लाग्थ्यो। जब उनले तीन वर्ष समाजलाई नजिकबाट छाम्ने मौका पाइन्। तब बुझिन् कि समाज अझै पनि निकै रुढीग्रस्त र ढोंगी रहेछ। उनलाई केही व्यक्तिले यत्रो पढे लेखेर केही काम नपाएर बहुला मान्छे भेला पारेर बसेकी छ भन्दा उनको मन निकै दुख्छ। तर, त्यसलाई उनी एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँछिन्।
त्यस्ता कुरालाई उर्जाको रूपमा लिँदै मुठीदान उठाउन घर–घर जानेदेखि तरकारी सहयोग माग्न हाटबजार पुग्छिन्। कपडा सहयोगका लागि हारगुहार गर्छिन्।
यो भित्र त्यस्ता केही व्यक्ति छन्। जो निकै खुला हृदयका छन्। उनको कामको तारिफ गरिरहेका छन्। उनका कदमा कद मिलाइरहेका छन्। उनलाई प्रेरणा र ढाडस दिइरहेका छन्।
आफैं स्कुटर कुदाएर दान संकलनमा खटिन्छन्। तर, स्कुटर पनि जेठ ८ गते अज्ञात समूहले रातिको समयमा फाउन्डेसनअगाडि जलाइदियो। त्यसपछि उनको त्यो सहारा पनि छुट्यो। अहिले उनको दौडधूप हिँडेरै हुने गरेको छ। लकडाउनले सार्वजनिक सवारी पनि चल्न पाएका छैनन्। कतै टाढै जानु परे साथीभाइलाई गुहार्नुपर्छ।
कुनै महिला सडकमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिए उनले नगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोग लिन्छिन्। ती निकायका गाडीमा राखेर फाउन्डेसनसम्म महिलालाई ल्याउने गरेको उनले सुनाइन्।
उनलाई स्थानीय सरकारको पनि राम्रो सहयोग छ। धनगढी उपमहानगरपालिका र मेयर नृप बडले निकै सहयोग गरिरहेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरिन्।
नगरपालिकाले घरको भाडा तिरेर ठूलो गुन लगाइएको कल्पनाले बताइन्। नगरपालिकाले धनगढी–४ मा दुई-ढाइ कठ्ठा जति जग्गा पनि उपलब्ध गराइदिएको छ। खाद्यान्नको अभाव भएका बेला उनले नगरपालिकालाई नै गुहार्ने गरेकी छन्। नगरपालिकाले पनि नाइँ नभनेर सकेको सहयोग गरिरहेको छ।
नगरप्रमुख बडकै अग्रसरतामा प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले १० लाख, विभिन्न संघ संस्थाले ५ लाख रुपैयाँ दिएको उनले बताइन्। उनका अनुसार समाजसेवी क्षेदुलाल चौधरीले ६ लाख रुपैयाँ दिने आश्वासन दिएको छ।
नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको जमिनमा घर बनाउन जग हाल्ने काम भइरहेको बताइन्। तर, त्यसका लागि त्यहाँका स्थानीयले निकै विरोध गरेकाले काम रोकिएको उनी बताउँछिन्।
स्थानीयले १५० जनाले फाउन्डेसनको भवन आफ्नो एरियामा बन्नै नहुने भन्दै हस्ताक्षर गरेरै विरोध जनाइरहेका छन्। जसले गर्दा भवन निर्माणको काम रोकिएको छ भने पाइएको बजेट पनि फ्रिज जाने अवस्थामा पुगेको उनको गुनासो छ।
समाजका अगुवाले स्वागत गर्दै सहयोग गर्नुपर्नेमा यस्तो व्यवहार गर्दा मुटु छियाछिया हुने गरेको उनको अनुभव छ। ‘आफ्ना लागि नभएर समाजका असुरक्षित दिदीबहिनीको जीवन रक्षाका लागि गरिएको कार्य भएकाले सबै पक्षको सहयोग हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘असुरक्षित दिदीवहिनीको रक्षा गर्ने प्रत्यक नागरिकको कर्तव्य हो नि? तर, किन विमुख हुन खोज्दैनन् मानिसहरू।’
कहिलेकाहीं त आफूलाई यस्तो व्यवहारले सुसाइट नोट लेखेर आत्महत्या गराैं लाग्ने उनले सुनाइन्।
तर, उनको त्यो सोच निरीह दिदीबहिनीका अनुहारहरूले परास्त गर्ने गरेको छ। समाजको अराजक तत्व हाबी भइरहेकाले कहिलेसम्म मनलाई सम्हाल्न सक्छु खोइ भन्दै उनी निराशा व्यक्त गर्छिन्।
समाजको अवरोधपछि उनीहरू असारे झरिमा आफ्नो माग सुनुवाइ होस् भनेर खुला आकासमुनि पाल टाँगेर अनसन बसिरहेका छन्। तर, कसैले उनीहरूको आवाज सुनेको छैन। बरु समाजमा बहुलाहरूलाई राख्नुहुँदैन भन्ने आवाज चर्किंदै गइरहेका छन्। यता कल्पनाको मन चिरिँदै गइरहेको छ।
यायावर बन्ने रहर
उनको अहिले एउटा सपना छ। फाउन्डेसनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने। फाउन्डेसन एउटा बाटोमा गएको दिन उनी त्यहाँबाट अलग हुने सोचमा छिन्। र, बिताउन चाहन्छिन्। बेफिक्री एउटा यायावर जिन्दगी।
धेरै संस्थामा बस्यो भने राम्रो हुँदैन भन्ने बुझेकी कल्पनाले धेरै लामोसम्म आफू संस्थामा नरहने र बाहिरबाट सहयोग गर्ने बताइन्। तर, यो भनेको संस्था बलियो बनिसकेपछि मात्रै बाहिरिने योजना हो। संस्था बलियो नहुन्जेल उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहने छिन्।
कहिल्यै बिहे गर्ने सोच नबनाएकी उनले प्रतिष्ठानलाई नै आफ्नो बिहे र अलग्गै संसार ठान्ने बताइन्। उनलाई अहिले आफ्नो संस्थामा रहेकालाई सधैं मीठो-मसिनो खुवाउने चिन्ता हुन्छ। राम्रो लुगा लगाइदिने मन हुन्छ। पाएको सहयोगले सके जति धानिरहेको कल्पना बताउँछिन्।
कल्पनाका बुवाको निधन उनी सानै हुँदा भएको हो। सात कक्षामा अध्ययन गर्दै गर्दा बुवा गुमाएकी उनी घरकी जेठो सन्तान हो। उनका चार भाइबहिनी छन्। ‘हामीहरूलाई आमाले भैंसी पालेर दूध बेच्दै पढाउनु र हुर्काउनु भएको हो। हाम्रा लागि आकाश र धर्ती भनेकै मेरी आमा हुन्,’ उनले भनिन्, ‘एकल महिला भएर आमाले गरेको संघर्षले पनि मलाई असहाय महिलाको सेवा गर्न प्रेरित गरेको हो।’
अहिले कल्पनासँग पैसा छैन। उनलाई आमाको शरीरमा एक सरो नयाँ लुगा र खुट्टामा चप्पल लगाइदिने रहर हुन्छ। तर, त्यो सकेकी छैनन्। र, जन्मदिने आमाको ओठमा मुस्कान दिन नसके पनि अन्य आमाहरूका ओठको मुस्कानले उनलाई सन्तुष्ट दिइरहेको छ। उनलाई आमाको लागि भाइबैनी भएकाले कोही नभएकाको लागि आफू सहारा बन्नुमा खुसी लाग्छ।